Sarudzo muFrance muna Kubvumbi 24, 2022 – JucelinoLuz
Emmanuel Macron kana Marine Le Pen
Águas de Lindoia, Kubvumbi 16, 2022
Tichifunga nezvemamiriro ezvematongerwo enyika anozviratidza muFrance, ndinojekesa kuti mamiriro azvino ekutsiviwa kwemutungamiri wenyika haakonzerese kuita kwangu semupi wezvemweya kana weparanormal, sezvavanowanzo kundidaidza, sezvo zvidzidzo zvesainzi zvichibva paParapsychology. ratidza kuti kurova kweanenge 7% (zvinomwe muzana) zvakakwana kukwereta yakakwira dhigirii reparanormality, uye zvekutaura kana oracle yarova ingangoita 70% (makumi mapfumbamwe muzana) yekufungidzira kwayo, sezvandiri nyaya yangu! Vanhu vanogara vachisarudza izvo zvakavanakira, izvo zvinoratidza mukana wakanyanya wekuchinja, zvisinei, izvi zvinenge zvisingamboitike – nekuti vese (vezvematongerwo enyika, pasina generalizing) chikamu chemutambo mumwechete wezvido.
Pano tine Emmanuel Macron wezvematongerwo enyika weFrance, mushandi wehurumende uye mubhengi, nhengo yelam Socialist Party kubva 2006 kusvika 2009. Pakazere, Macron anoonekwa semukuru.Vamwe vanomuti akasununguka, asi vamwe vanomurondedzera semutongi wevanhu. Munguva yake muFrench Socialist Party, aive mubapiro recentrist remusangano, ane mitemo yakatsanangurwa se “nzira yechitatu”, maonero anowanzobatanidzwa nevezvematongerwo enyika vakadai saBill Clinton, Tony Blair naGerhard Schröder. Kureva, “kubva kuruboshwe”
(Akataura sarudzo dzisati dzaitwa kuti vasina kubayiwa havasi veNyika – ndiko kuti, vaive vasiri French, akabva achinja maitiro ake mumakakatanwa esarudzo dzemutungamiri wenyika, akati zvaive nenzira ine rudo!? – akachinja zvinoshamisa uye nekukurumidza!)
Kune rimwe divi, isu tine Marion Anne Perrine Le Pen, anozivikanwa zviri nani saMarine Le Pen, igweta riri kure-kurudyi uye wezvematongerwo enyika anobva kuFrance. Nhengo yeParamende yeEuropean kubva 2004 kusvika 2017, akasarudzwa semutungamiri weNational Front musi wa16 Ndira 2011, achitsiva baba vake, Jean-Marie Le Pen. Anga ariwo kanzura wedunhu reNord-Pas-de-Calais administrative dunhu kubvira Kurume 2010 uye kanzura wekanzuru yeHénin-Beaumont kubva munaKurume 2008. Nemamwe mazwi, “bapiro rekurudyi”
“ Vanhu vanotya kuchinja nechikonzero chiri nyore; kuchinja hakuzivikanwi, ndiko kuti, chinhu chisingazivikanwi. Zvechokwadi, nokuti chimwe chinhu chinogona kuitika, munhu wacho haasati ararama izvo zvichauya, saka kusava nechokwadi, kusachengeteka uye kutya zvinowanzoitika manzwiro pakutaura nezvekuchinja. Shanduko dzinogadzirwa nekurova nekupotsa. “
Chiporofita hachisangani nekuruboshwe kana kurudyi! Uye hazvitomboshande semutambo wenhabvu….
“Magumo eFrance ari mumaoko evhoti yako.”
Zviripachena, hapana kana mumwe wavo achava mhinduro kunzira yeFrance yechiedza nekufambira mberi, zvisinei, mumwe wavo achada kutora chinzvimbo.
Zvinongoitika kuti mamiriro ekunze ekutarisira anokonzerwa nekutevedzana
Sarudzo yemutungamiri wenyika inogara ichizviratidza sechinguva chekufara
mhosva uye polarizations, asi ndinoda kujekesa kuti handisi kutsanangura a
kungodudzira kwoungwaru kwezvakazarurwa zvandinogamuchira, asi
Ini ndinoita sechanera, mota yekubatanidza kuti nditaure kune ruzhinji nezve fungidziro yangu.(zviporofita).
Pane mukana unogona kushandurwa kuita
gwara, mune chinangwa chaicho, uye kugona uku, izvi
kuita zvinhu zvechokwadi, muhutachiona, ndizvo zvandinoona, asi zviripo
makesi anogona kuchinjwa (kana matenderedzwa akavhurwa uye zvakadaro
zvibvumire), nekuita kwevanhu kana kusiiwa, nekutaura kwemasimba
, izvo zvisingaite chete pamusoro pechokwadi, asiwo
seri kwezviono zvenhau, mumativi ose oupenyu hwavanhu, kwete bedzi mundima yezvamatongerwe enyika.
Ndinoda kutaura soneti yakafemerwa yevadetembi vekare varindi, vanotaura nezvekushandiswa kweNhoroondo,
ine musoro unoti “Nhoroondo kana mutambo wechess”, iyo inonyatso kupfupisa nguva yenhoroondo yatiri kurarama, apo masimba akaipa anobatana kushandura nhoroondo, kuigadzira zvinoenderana nezvavanofarira, izvo, kazhinji, hazvienderane. zvinodiwa nevanhu: Zvinodiwa neFrance kuvandudzwa kwezvematongerwo enyika, kuvandudzwa muRuramisiro, nekuti, mukati memakore angu 53 ehupenyu hwakatsaurirwa kunamata, ndakaona zviremera chete nezvematongerwo enyika zvichitora mukana wevanhu vakanaka, kwete muFrance chete, asi kwese kwese. pasi – pasina generalizing – kuburikidza nevimbiso, uori, unyengeri, uye pamusoro pezvose, vamwe vanoshandisa chiedza chemurairo, mukuita kusaruramisira. Naizvozvo, hazvienderane nezvinogoneka zvirevo uye zvinopomerwa zvinogona kuburitswa munguva pfupi iri kutevera (chakanaka kana chakaipa), uye handina chandinopokana nacho chero chazvo (ini handisi chikamu chebato rezvematongerwo enyika, ruremekedzo kune vese) , chero, ini ndangozviisa ini ndiri munzvimbo yemutungamiri wemweya kune vagari vemo vari kutsvaga nzira yechiedza, kana zvichida, nyaradzo uye nhungamiro muupenyu hwavo kune ramangwana rakanaka – ndiani anoziva, kambasi, inogona kuunza ivo maonero matsva-nekuti handina chinzvimbo chezvematongerwo enyika, chokwadi, avo vanorarama kubva mukubatwa kwevamwe, havagone kuwana nzira yechiedza, vachararama nekusingaperi muhumwe, mukutsvaga simba, mukusurukirwa, kuparara mune imwe nzvimbo. denderedzwa rakashata, kazhinji, pasina kudzoka.
Prof. Jucelino Luz – muoni, munyori, wezvakatipoteredza, chipangamazano wezvemweya
Kuti udzidze zvakawanda , uye uenderere mberi nekuverenga , baya pane imwe yeiyi link pazasi :